Usayizi 11.03 MB
Play 8 385
Umbhali: Massimo Taccoli, DG, Seeley, Dave Eckert
I Canadair CL-215 yilona ibhanoyi lokuqala zakhiwa njengendawo Idelakufa amanzi elwa imililo. Lona ndiza edume kunazo yalolu hlobo, ithuthukiswe eFrance, usuphenduke into efanayo Canadair izindiza amanzi-ngamabhomu. I CL-215 yayiklanyelwe e Canada by Canadair (manje Bombardier) futhi alenza 125 amakhophi phakathi 1966 futhi 1989, zithunyelwa amazwe kweshumi. (Umthombo Wikipedia)
In le nguqulo entsha imodeli 3D yabukezwa ukuba 90% njengamanje has a isethi ephelele animations, abanikeze asebenza nabo virtual iziyisikhombisa animated, ihamba futhi umnyango breech nge isitebhisi, cover izimbiza qeda intuthu animated. abanikeze asebenza nabo Virtual esikhanyayo ebusuku.
Kunezinhlobo ezintathu amasethi ukwakheka ezimele ngamunye opharetha real: Italy Civil umsebenzisi Civil Spain, Newfoundland and Labrador, indlela yokwenza ayatholakala kwi-inthanethi.
idatha yomsebenzi osizayo kanye nokusebenza eyatholakala kusukela idatha esemthethweni.